तपाईंको व्यवसायको बारेमा र्याप गर्ने समय (मेरो सम्झना नगर्नुहोस्) | Martech Zone
यो एक ट्वीटबाट सुरू भयो ...
Douglas Karr र्याप श्रद्धांजलि https://t.co/oPodYLEZnQ @dgglaskarr #rappitt http://t.co/gVR64opiLM
- र्‍याप ITt (@rappittmusic) मार्च 10, 2015
भन्नुपर्दा मलाई उडाइएको थियो एक महत्वहीनता हो। म हाँस्न रोक्न सक्दिन यो र्याप कति राम्ररी लेखिएको थियोn र म कहिल्यै नभेटेको कुनै व्यक्तिबाट अनुसन्धान गरिएको थियो। त्यो कोही डेन स्टोक्स थिए।
दान सुरु भयो Rappitt.com र एक आर्थिक तनाव स्टार्टअप भएको, प्राप्त गर्न अनौंठो तरिकाहरूको लागि खोजिरहेको थियो शब्द (बुझ्नुहोस्?) तिनीहरूको व्यापारको बारेमा। उनीहरूले भेट्टाए Martech Zone र मलाई हेरे पछि मैले निर्णय गरे कि म एक ठूलो लक्ष्य हुनेछु।
मलाई यो मन पर्छ ... गोरिल्ला मार्केटिंग र प्रभावकारी मार्केटिंग सबै र्‍याप गरियो एक ट्वीट मा माथि। (मैले यो फेरि गरेँ)। यहाँ दानको कथा छ:
मँगी संगीत को लागी एक जोश विकसित, र १ ra बर्ष पहिले विशेष र्यापिंग। संगीतको लागि मेरो जोश बढ्दै जाँदा, मैले महसुस गरे कि म यस क्यारियरको छनौट गर्न चाहन्छु ... एक मोडमा। Rappitt.com मा, हामी वास्तवमै महसुस गर्छौं जुन हामीले आफ्नो शिल्प सिर्जना र सिद्ध गरेका छौं, नतीजा एक उत्पादन हो जुन सबै अवसरहरूको लागि अनुकूलन खुशी र जागरूकता सिर्जना गर्दछ। मैले यी 15 वटा भिडियोहरू साथीहरू, सहकर्मीहरू, र व्यापारीहरूका लागि वर्षौंसम्म बनाए।
यस प्रकारको सिर्जनात्मकताको लागि ड्यानको मूल्य निर्धारण निष्पक्ष छ र अन्तिम भिडियो मात्र एक थप बोनस हो। तपाइँलाई थाहा छ तपाइँ तपाइँको सामाजिक प्रोफाइल वा तपाइँको व्यवसाय को बारे मा एक र्याप गीत चाहनुहुन्छ?
आशा छ, डेन आफ्नो महान रणनीति को लागी मान्छेहरु बाट केहि आदेशहरु को लागी। यो साबित गर्नुहोस् कि यस प्रकारको प्रभावकारी मार्केटिंगले काम गर्दछ!
टैग: हास्यास्पदरापर्‍याप सेवार्यापिट